Khuda Haafiz(2020) - Channel Zone
Posted by Little Man, Released on August 18, 2020, More episodes Khuda Haafiz
Download Khuda Haafiz(2020), Watch Khuda Haafiz(2020), don't forget to click on the like and share button. Series Khuda Haafiz always updated at Channel Zone. Don't forget to watch other series updates.
ဆမီရ်​ချောင်ဒရီနဲ့ နာရ်ဂိရှ်​ချောင်ဒရီတို့ကို မိဘာတွေက ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလက်ထပ်​ပေးလိုက်ကြပါတယ်။
နာရ်ဂိရှ် ချောင်ဒရီဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အလုပ်ထွက်လိုက်ရပြီး ဆမီရ်ချောင်ဒရီကလည်းလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း​တွေပိတ်သွားတာ​ကြောင့် နှစ်ယောက်စလုံးက နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ နာရရ်ဂိရှ်ကအလုပ်အရင်ရသွားပြီး ဆမီရ်က ကျန်နေတာ​ကြောင့် နာရ်ဂိရှ်ကိုတစ်ယောက်တည်းနိုင်ငံခြားလွှတ်ဖို့စိတ်မချပေမယ့် လွှတ်လိုက်ရပါတယ်။
နာရ်ဂိရှ် ချောင်ဒရီကနိုင်ငံခြားရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဖုန်းခေါ်လာခဲ့​ပေမယ့်အလုပ်မရဘဲတစ်ခြားတစ်နေရာကိုခေါ်သွားနေကြကြောင်း သူ့ကိုနှိပ်စက်နေကြကြောင်း နဲ့လာပြန်​ခေါ်ဖို့အတွက်ဆမီရ်ကို​ပြော​တော့ ဆမီရ်တစ်ယောက် နာရ်ဂိရှ်ဟာ အကြီးအကျယ်အန္တရယ်တောထဲရောက်နေပြီကိုသိတဲ့အခါမှာတော့….